Ngaba Kubalulekile ukuba uYesu Rose? — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Ndikhumbula ekhula usapho wayeba bonke eIsta. Singavuya ukuya mall kwiveki phambi uthabathe umfanekiso kunye Rabbit. Mna buqu Ndicinga ukuba yeyona creepiest zonke mascots leeholide. Umvundla onzima? Loo nto traumatizing abantwana. Kuphela ukuba, kodwa wena waxelelwa ukuba uzakuhamba ukubonisa phezulu ekhayeni lakho ngempelaveki? Ngenye Easter, singavuya ukuya ecaweni, kwaye ke Ndingathanda kufika ekhaya. Singavuya ukwenza yamaqanda pasika. Singavuya ukuba intsapho. Singavuya na iingobozi encinane iPasika zonke uhlobo iimpahla apho.
Kwaye abaninzi bethu amabali ezifanayo. abahlobo bam non-lamaKristu nokuba amabali ezifanayo kakhulu. Zonke ezi zinto kuthi okhulele inkcubeko apho siyazi ngokuvuka kukaYesu ithile emva kombhiyozo, kodwa kwabaninzi oko akuyomfuneko ngokwenene kumthendeleko.
Kutheni Le Ingxoxo kubalulekile
Umbuzo siza sicela yaye lizama ukuphendula namhlanje: Ngaba kubalulekile ukuba uYesu ngokwenene wavuswa kwelabafileyo? Kunjalo na ayinamsebenzi ukuba zonke Ndifuna ukwenza kukwenza uzingela iqanda pasika. Oko nanto yakwenza noYesu. Kodwa sonke sifuna ngaphezu ebomini. Ndicinga ukuba oku emibuzo afanelekileyo kakhulu, kwaye ndicinga ukuba kubalulekile ukuba ingacela izizathu ezimbalwa.
1, Ezinye Andiqondi ukuba yakha yenzeka. Abaninzi kuthi siqwalasele uvuko ngumntu emva kokufa ukuba azinakwenzeka. Xa iintliziyo uyeke, akukho Ubomi abungaphezulu Ongofanelwe. Imizimba musani ukuqala kwakhona. Siye Andizange nikubonile, kubonakala kungekho ukulungelana nemithetho yendalo, kwaye abaninzi bazive bezithembile ukuba ayizange yenzeke. Ngoko ke kubalulekile ukuba ucinge.
2, Abanye bethu bacinge ukuba awungeni. Thina musa ukucinga kakhulu ngayo nokuba indlela. Mhlawumbi wenza, mhlawumbi akazange. Yintoni na enam ngobomi bam ngawo onke. Mhlawumbi ndiza sinikele ingqalelo kuYesu ngaxa lithile kamva ebomini bam, kodwa ngoku mna okulungileyo. Zingandihambeli wonwabe, Ndiza yokuxhayelwa izinto ezintsha, Ndiya ukufunda, Ndizama ukwakha isiseko okanye umsebenzi. Andifuni nexhala ngokwenene ngovuko ngoku. Kodwa ke uvuko ayikho mxholweni kwaye nabani. Kwaye Ndifuna ukubonisa ukuba ingxoxo yethu namhlanje.
3, Abanye bethu ucinga ibali uvuko njengoko nje nonefuthe. Oko luphawu eliphakamayo ngaphezu iimeko zakho. Yinto ibali esihle nto kuthinjwa iingqondo neentliziyo zabantu kwiminyaka yokugqibela 2000 kwiminyaka. Mhlawumbi kukho yokuziphatha ibali, kodwa ngaphezu koko.
Isizathu Ndicinga ukuba oku kubalulekile ukuthetha kungenxa yokuba bonke emithathu kuloo iimbono zahlukile ngaphezu oko kufundiswa yiBhayibhile ngovuko lukaYesu. Ngoko ukuba kunjalo abaninzi kuthi qatha izinto ezahlukeneyo ngovuko ngaphezu iBhayibhile ayithi sifanele sizibuze enoba okanye ukuba imiba. Ista ixesha lithuba kakhulu ukuba le ngxoxo.
Ukuba le yindlela esizijonga uvuko ngoko ukuba impendulo akukho, ayinamsebenzi lonto. Kodwa ukuba sele akuyi elithekelelwayo, Mna ngumKristu kwaye ndicinga ngokwenene uYesu wavuka waphuma engcwabeni. Hayi nje mna ndicinga ibalulekile, Ndiyacinga ukuba sonke amathemba ngaphandle.
Nto ndicinga ukuba wamvusa
Ndifuna ukuxelela ngokufutshane ukuba kutheni ndikholelwa ukuba uYesu wavuswa kwabafileyo. Mna andikanyuki, ukuba achithe Makhesenze ixesha kule, ngokuba akukho injongo yale ntetho. Injongo ngokuhlwanje ukuba ncokola malunga nokuba ingaba okanye ibalulekile, kodwa ukuba ndiza ukuba okunene wavuka ukulixelela ukuba benze amabango asekelwe ukuba, Ndifuna ukwazi izizathu mna ndiyakholwa ukuba.
1. The kuphatha zeBhayibhile njengesiganeko Historical
Xa ufunda isibhalo, Abapostile musa ukumphatha uvuko nantoni ngaphantsi Enyanisweni. Icacile ukuba akukho bazicingela ukuba ukubhala iintsomi. Xa abapostile ukushumayela ngeentshumayelo emva enyukela eZulwini uYesu, kuthetha ngayo ukufa kukaYesu (apho iskram) kunye novuko lukaYesu kunye namandla. Njengoko ukuba zombini zizinto.
ISibhalo kucacile ukuba uYesu ngokoqobo wavuka kwabafileyo. Kwaye ndiyakholwa iSibhalo ukuba iLizwi likaThixo. Ndiyakholwa ukuba inokuthenjwa. Andiqondi ukuba ubuxoki okanye bayikholelwayo. Kwaye ndlela elibhaliweyo wena ubuya kwenza ukuba phezulu bhala njani. Obubangela ukuba isizathu sesibini Ndiyakholwa kwenzeke uvuko.
2. Ndiyathemba Ubungqina ezithembekileyo
Sonke ukwamkela izinto ngokwesiseko ubungqina kwabanye. Asifanelani kuloo mdlalo basketball, kodwa thina obhengeza okanye abahlobo awayelapho Mandiphinde ezemidlalo. Awunayo kufuna ubungqina obusemzimbeni. Wena abathembe. Sasiyikhumbula udidi, kodwa sinethemba ofunda Kwathi amanqaku zabo. Asifanelani kwidilesi Gettysburg, asinazo nayiphi bhanyabhanya, kodwa ndithemba ukuba oku kwenzeka. Siyathemba ukuba loo mazwi kwabo Abraham Lincoln.
Ngoku ndiyazi ezi zinto ezahlukeneyo ngaphezu uvuko, Ke mna ndithi ukuba bathi, kukho iziganeko sikholelwa yenzeka kuba sivile ukususela kumthombo ethembekileyo. Yinto yemvelo kububulumko ukwenza ukuba akukho sizathu okanye bangabathembi kuyo.
Abantu abathetha ngovuko eBhayibhileni, zezi kangangoko ndikuxelele, amangqina ethembekileyo. Akukho sizathu kum ngokungazithembi kubo. Inyaniso, kwakukho amakhulu okuzibonela ababona uYesu. Andikwazi kucinga nayiphi na inkundla apho 500 ngababoneli bekungayi kuba ngokwaneleyo ukungqina ityala. Ndikholelwa ukuba ubungqina sisiphango yaye kumele ukuba uYesu uvukile kwabafileyo.
3. Ntombikayise Ingcaciso Zimlungeleyo Izibakala
Ukuqhambuka ubuKristu umdla kakhulu. Ukuba indoda engumYuda wazalelwa kwelaseGalili, ukufundisa kunye uhlobo olutsha wegunya. ukwenza imimangaliso. Wahlanganisa abalandeli. Ukufumana ezingxakini kunye nabasemagunyeni yamaYuda. Kokula- ngabahlobo bakhe. abulawa. Kwaye ke ingcwaba lakhe kufumaniseke ukuba nokungabinanto.
Kwaye ngandlela ithile lo mntu, owathi uza kwenza ulawulo emangalisayo yezinto-, ngukumkani, aphinde ayakhe itempile zamva ezintathu nangona wafa uba umthombo ngentshukumo. Abafundi bamshiya. Batsho boyika, ukutyhafisa kuba yayikhangeleka ngokungathi zamlandela ilize. Kodwa ke xa sifunda incwadi yeZenzo, sibona ukuba sonke nje ngesiquphe bayakhuthazwa nobuganga. Yaye ukulungele ukuba intshutshiso uYesu.
Bafundisa ukuba nguye uThixo, ekuziqheliseni yamaYuda, ombonayo ukuba uThixo mnye. Iyakufundisa okokuba uvukile kwelabafileyo, baza bafundisa ngokukhawuleza emva kokuba kwenzeke. Ngoko abantu esisenazo. Ukuba ayizange yenzeke, iza xi. Abasemagunyeni na uvale phantsi yonke imeko, leyo isoyikiso kubo, ngokuthi nje ebonisa abantu umzimba wakhe. Uhanjiso ikhula, nabalandeli bakaYesu baninzi. Amawaka msinyane nje emva. Konke kodwa enye kwabo bafundi elinambini, ligqibela abulawa ngenxa yokholo lwabo kuKristu. Babulawa le ndoda. Ayeza kangaka, kwaye uzibophelele yokuba nguye uNyana kaThixo, Uvukile kwabafileyo ke, ukuba abulawa kuba.
Njani ukubacacisela ukuba? Ndicinga ukuba ingcaciso kakuhle ezichazwa, ukuba okunene wenza avuke kwelabafileyo. Ndiyazi andiyi kufa ngenxa banentsomi yokuba Ndazenzela. Kuphela into enokumenza bonke aba bantu, kukuba yasukuma.
Ngoko ke loo nto engqondweni, Ndifuna ukuthetha kwezinye erheshayo uvuko.
Ngoko ukuze ixesha eliseleyo, siza sithethe ngalo mbuzo ngoko. Ngaba kubalulekile ukuba uYesu wavuswa kwelabafileyo. Ndiza kukuxelela ukuba kutheni ucinga ukuba kubalulekile. Ndiza kukwenza oko ngokujonga ndinyana zeBhayibhile, 1 Korinte 15. Ke kuloo ngxelo, Ndiza kukubonisa iziphumo ezintathu uvuko.
e 1 Korinte 15, UPawulos elinyanga uvuko kungekuphela nje inyaniso yembali, kodwa ukuba iziphumo nto leyo ubomi nokufa.
Ezi zizathu zithathu zibaluleke kakhulu omnye nganye kuthi kweli gumbi. Zibalulekile umntu wonke enye ephila. Kwaye uya ukubona isizathu sokuba ndikholelwe ukuba ngephanyazo. Nazi izinto uPawulos uthi:
Ke, ukuba akukho luvuko lwabafileyo, ngoko nkqu noKristu woba akavukanga. Ukuba ke uKristu akavukanga, koba akunto ukushumayela kwethu, loba luyalambatha nokholo lwenu. Sofunyanwa ke singawo namangqina amxokayo uThixo, ngokuba sangqinayo ngoThixo ukuba wamvusa uKristu, abo wabaziyo angamvusanga, ukuba ke kanti abafileyo abavuki. Kuba, ukuba abafileyo abavuki, nkqu noKristu woba akavukanga. Ukuba ke uKristu akavukanga, ukholo lwenu lilize, noba nisesezonweni zenu. Ngoko abo nabalele ukufa bekuKristu, boba batshabalele. Ukuba singabathembele kuKristu ithemba kobu bomi kuphela, thina sizezona ntsizana kubantu bonke.
(1 Korinte 15:13-19 yesiXhosa)
mna. Ukuba uYesu akazange amvuse, akukho Iindaba Ezilungileyo
Ndichaza ukuthini xa esitsho? Kunjalo kukho izinto ngamanye amaxesha apha ezindabeni ezilungileyo. Kodwa ndithetha iindaba ezilungileyo ekugqibeleni, oko iBhayibhile ikubiza iVangeli. Inyaniso, nangona kukho izinto ezintle esizibona iindaba na ebomini bethu, kwanezinto ku sinika ithemba okomzuzwana, namnye kwabo ezo zinto kusinika ithemba elide.
Itshekhi imali yerhafu ayikwazi kusinika ithemba luhleli. Ukwamkelwa ibe bethweswe akanako ukunika ys ithemba elide. Kuthethathethwano okanye umtshato, akanako kusinika ithemba luhleli. Zonke ezi zinto ziya kuza kuphela. Yaye kuxhwilwa kuthi ngephanyazo. Ngaba likho ithemba zeyure? Ngaba likho ithemba lokuba iphela kunye grand?
IBhayibhile uyayazi nenyanisekileyo malunga imeko ihlabathi lethu. Si ya, ihlabathi lethu yaphulwe, kwaye yonke indalo kufuneka sibuyiselwe. Siyazi ihlabathi lethu yaphulwe. Kweentlekele zendalo isifo. nolwaphulo. Kubonakala ngathi kukho ubunzima entsha kudutyulwe yonke imihla ngoku. Kuqhubekani? ukwaphuka.
Yinto khona nje phandle nangona. Sonke baphuke kakhulu. Ubungqina oku kubomi bethu izono zethu, amaxhala zethu, ulwalamano lwethu baphuke, ungquzulwano omnye nomnye, libi zonke, kwethu hlukana kuThixo.
Ukhe wacinga kutheni thina indlela thina? Kutheni kungekho kungakhathaliseki ukuba sizama asikwazi nigqibelele thina? Kutheni sisenza izinto esizenzayo? Kutheni siqhubeka Wakufika izinto bayigcinayo sibandezeleke? Kutheni sisenza izigqibo entshabalalo? Kutheni buhlungu abanye? Siza kwaphulwa. Nantso iindaba ezimbi.
UYesu Lowo uThixo wathumela ukubuyisela, yaye ngokukodwa ukubuyisela ukuba uMdali wethu. Nantso iindaba ezilungileyo.
Akukho mathandabuzo ukuba ubuKristu ezingafumanekiyo phakathi iinkolo zehlabathi. Enye yezinto yayahlukile ubuKristu kukuba kusekelwe iziganeko zembali ngendlela eyodwa. Kukho ezinye izinto kwenzeka ukuba sikholose. Sikholose indoda eyiyo, o wa bulale, nothi okunene wamvusa kwabafileyo. Ke ukuba ezo zinto aziyonyani, ke iindaba ezimnandi uMsindisi abunene.
Muhammad umprofeti elukholweni amaSilamsi, ufile. MaMuslim siyazi kuyo umzimba wakhe kwaye nengcwaba lakhe. Kwaye oku akukho ndlela benzakalisa kokholo yamaSilamsi.
The Buddha wa wutshiswe emva kokufa kwakhe, kwaye kukho izinto ukutshiswa ezazinikwayo kwiintsapho ezahlukeneyo. Ngoko sazi apho umzimba Buddha alunto. Kwaye ukuba akukho ndlela benzakalisa ukholo umBhuda ngayo.
umzimba kaConfucius wangcwatyelwa imizalwane yakhe China. Okufanayo kuthethwa uJoseph Smith, ezahlukeneyo Pope yakhe, etc. Isibakala sokuba aba bantu abafele akukho ndlela benzakalisa ukholo abalandeli zabo.
Kodwa ukuba kukho umntu ukufumana umzimba ka Yesu, UbuKristu iyayeka ukuba kho. iicawa zamaKristu nganto. abashumayeli abangamaKristu ngamaxoki. Nabalandeli kukaKristu inganiki. Kakade ke, ukuba umzimba ka Yesu, wayekho ukuze kungafunyanwa, abasemagunyeni ange nje abonisa ukuba abantu ukuba ungawatyumzi ukusasazeka ukuzinikela yonqulo umntu. Kodwa ingongoma ndenza kukuba ibalulekile.
Phulaphula oko uPawulos uthi apha 1 Korinte 15. Ngaphambili walatha iVangeli okanye iindaba ezilungileyo njengoko nto ibalulekileyo. Uthi loo nto washumayela kubo, Beyamkele ke, kwaye ngoku ukuma kuyo. Kodwa phulaphula oko athi kwivesi 14.
"Ke ukuba uKristu akavuswanga, koba akunto ukushumayela kwethu, loba luyalambatha nokholo lwenu. Sofunyanwa ke singawo namangqina amxokayo uThixo, ngokuba sangqinayo ngoThixo ukuba wamvusa uKristu. "
UPawulos andicingi ukuba uvuko ibali ezinye nonefuthe. Ucingela ukholo kuxhomekeke kuyo. Ngoko xa si yinyanga ngathi ibali nonefuthe, ukuze uyeke kwakunye ngathi ukuba loo nto ubuKristu. Ukuze kwakunye nokuba ukusebenzisa iBhayibhile ngokuba. Yiloo nto kwakuthethwa nguPawulos okanye ekujongwe. Kwaye kakubi yetekisi engcwele ukuluphatha ngaloo ndlela.
Ukholo lwamaKristu lusekelwe News. Oku kusekelwe wokuvakalisa iindaba malunga nobomi, ukufa, kunye novuko lukaYesu.
Ukuba asiyonyaniso, ngoko intshumayelo kaPawulos kulilize. Kuphela ukuba, kodwa ukholo umKristu kulilize. Yintoni ke bakholwayo, ukuba ibali likaYesu ayinalo inesiphelo? Kukho iindaba kuphela ezimbi. Ndingu umoni, UYesu wazama ukwenza into malunga naloo, kodwa ekugqibeleni ukufa wakhwela
Ngoko ke, ukuba uthe owamvusa, akukho Iindaba Ezilungileyo.
Kodwa ekubeni ve, kukho Iindaba Ezilungileyo
Kukho Iindaba Ezilungileyo! Iindaba kuyinyaniso. Sinako izakugcinwa kuThixo. Ndifuna ukufunda kuwe Kwiivesi zokuqala ezimbalwa 1 Korinte 15.
Ngoku ndiza ndinikhumbuza, abazalwana, iindaba ezilungileyo, ezo ndazishumayela kuni, nazamkelayo, umi apho, yaye ngawo nisindiswayo nokusindiswa, ukuba nizibambile ngelizwi endazishumayela ngalo kuni; ukuba anithe nafumana nakholwa. Kuba ndaninikela kweziyintloko izinto oko ndakwamkelayo nokukwamkela: okokuba uKristu wazifela izono zethu ngokwezibhalo, nokokuba wangcwatywa, nokokuba uvukile ngomhla wesithathu ngokwezibhalo, kwaye oko qnokokuba wabonwa nguKefas, emva koko ngabalishumi elinababini. Emva koko wabonakala kubazalwana abangaphezu kwamakhulu amahlanu ngexesha elinye, inkoliso yabo esahleliyo nangoku, inxenye ke yalala ukufa. Emva koko wabonwa nguYakobi, kamva ngabo bonke abapostile. Ekugqibeleni kwabo bonke, kwanga kukwinto ezelwe lingekabi lilixa, wabonakala kum.
UYesu wafela izono zethu. Ke yena wavuka ngenxa yezono zethu. Nantso inxalenye yebali yeVangeli. Nantso iindaba ezinkulu aboni.
Into yokuba uYesu wavuka kwabafileyo uqinisekisa yonke into wathi ngoThixo ngaye. Nantso into izitampu isigidimi sakhe. Yiloo ibango ukuba akukho enye inkokeli nayiphi ukholo okanye ukwenza.
Niyabona ukuba le ndaba kubalulekile ukuze uPawulos ukuba athi, ukuba loo inxalenye akuyonyaniso, koba akunto ukushumayela kwakhe lulilize. Cinga ibandla usiya ngeCawa. Ukuba uvuko asiyonyaniso ukuba ezichaphazela abo ukushumayela konke? Ngaba uve malunga nokufa kunye novuko lukaYesu nendlela esebenza ngayo kubomi bethu?
Le Uvuko isicelo ebomini bakho. Ibalulekile kuwe kuba ubomi nzima. Izono ngokwenene. Ukugula yokwenene. Ukufa wokwenene. Ingaba kukho naziphi na iindaba ezilungileyo kuthi? Ngubani na ophumelela ekupheleni? Kukho iindaba ezilungileyo. UYesu wavuka kwabafileyo. Kwaye uza ukwenza zonke izinto ezintsha. Ingcwaba elingenamntu ingqina ukuba izithembiso zakhe ziyinyaniso.
Makhe kuqhubeka ukuthetha malunga neziphumo
II. Ukuba uKristu akazange kubavusa ekufeni, akukho kuxolelwa
Ndiza ukufunda ezinye lyrics random ngokuxolela.
"Nkosi mxolele, wavuka ke imikhosi mnyama kuye / kodwa kwakhona safumana unobangela ilungisa zezokona. "
"Nkosi, nceda andixolele sinnin yam '/ Ndiya asitsho ukuba mna ndigqibile / Ke mna ndithandaza kwangaphambili / Mbangeleni indlela amehlo akhe krwaqu ngathi ukudlala yam bhulukhwe."
J. Cole, Begcakamele Up
"Ndithandazela mna ndiya kuxolelwa / zonke izigqibo embi ndiya / Wonke udade Ndidlale / unobangela ndiseyilaa usoyika unanamhla / Kwaye mna wenza izigqibo ndenza ityala mntu ngayo / Oku ndakhetha ubomi, okanye endaweni, ubomi owandinyulayo "
Jay-Z, Disemba 4
"Ndiye ndizame ngathi mna ezahlukeneyo kodwa ekugqibeleni thina sonke okufanayo / ndithandaza kuthixo, ubawo ukuxolela n **** mna utshintsho ndisoze. "
"Mna moni, ngubani mhlawumbi isono ngob kwakhona / Nkosi ndixolele, UNdikhoyo andixolele / izinto andiqondi. "
Wonke silixabisile uxolelo. Nkqu madoda a icace ukuba awufuni kwi atshintshe. Wonke umntu ufuna kukuxolelwa.
Kufuneka yethu Zokuxolela
Kukho na umntu apha ogqibeleleyo. Sonke asifezekanga kwaye Sone. Isono lizwi odumileyo. amaxesha Sikhetha amagama othambileyo ezifana iimpazamo, okanye ukungafezeki, okanye iimpazamo, kodwa igama elithi "isono" uthetha into ngqo ngezinye amazwi. Xa iBhayibhile ethetha sono oko kuthetha bangamthobeli uThixo ozenzayo, amazwi akho, okanye iingcinga zakho. Loo nto engekhoyo uphawu, engayifikeleli oko kufunwa nguThixo, kuko enenjongo uphawu engalunganga, bavukela uThixo.
Kwaye iBhayibhile ithi ukuba izono azikho nje imithetho random eyaphukileyo, kodwa ukuba isono ukungathobeli ejolise ngqo uThixo ngokwakhe. UThixo isono ngokobuqu, njengoko lihlaselwe buqu phezu kwakhe kwakhe, ubulumko, nozuko. Ngendlela efanayo ukuba Ndingathanda ukuthatha umntu evuthayo indlu yakho, kuphela njengoko usenokulalanisa kwendlu yakho, kodwa wena, UThixo lithathe nawaphi na ukungathobeli indalo yakhe hlasela yena. Akukho nto ke sithetha ngaye. Isono ulwaphulo nguThixo olungileyo. Kwaye ukuba uThixo mnye uMgwebi siza kuma phambi.
Nantsi Umbuzo wam kuni: Ngaba ulindele yokuxolelwa yezono? Ngoba? Kutheni ngumgwebi kakuhle kuze ke aboni off enefolokhwe ngenxa bubugqwirha ezifana isono? Kulungile kuphela indlela uThixo uyabaxolela isono Ukuba sele eyihlawule. Kwaye kukho kuphela ngubani wakha wabanga ukuba ahlawule ngenxa yesono, uYesu. Kunye novuko lukaYesu na ubungqina bokuba ukuba intlawulo yamkelwa.
Kwi Izono zakho
Enye yezinto nguPawulos ezakhankanywa ukuba uYesu akavukanga na: "Ukholo lwakho i lilize, noba nisesezonweni zenu."
Oko kuthetha ukuba ezonweni zenu, ukuba kufuneka uhlawule kubo. Oku kuthetha ukuba sele eselapha irekhodi yakho. Oku kuthetha ukuba sele nangoku sasikhonza kubo. Oku kuthetha ukuba ungafumenanga ndihlangulwe. Oku kuthetha ukuba akayi kuxolelwa kubo. Ukuxolelwa kwezono oluxhomekeke uvuko yokoqobo komzimba kaYesu Kristu.
Umnqamlezo kulapho uYesu Waloyisa isono. Oku kufana lomdlalo ngokuzamana isono nobubi. Kwaye ukuba uYesu akazange sukuma, elithetha isono won.
Ezinye iinkonzo musa kwenza lukhulu ukuxolelwa kwezono. Akukho ingcaciso kutheni nomgwebi ezilungileyo ngoyaba kubo. Ukufumana eZulwini wenza okulungileyo ngaphezu olubi, kodwa kuthekani embi? Akukho namnye kuthi uya kukuncoma ijaji bavumela nababulali off enefolokhwe kuba bamnceda nenenekazi endala ngaphaya kwisitrato ngosuku olulandelayo. Isono kufuneka ihlawulwe ukuze.
Akufuni ukuma phambi koThixo ezonweni zenu. Kukho iindawo ezimbini unokuba, kuKristu okanye esonweni senu.
Kwaye ukuba uYesu akazange kuyivusa, akukho kuxolelwa.
Kodwa ekubeni ve, kukho uxolelo lwezono!
UYesu wenza ezininzi iintlobo zonqulo zigeze, ngenxa, hayi kuphela yena ephilisa abantu, kodwa ezo abezithetha kubo izono zawo zixolelwe. UYesu igunya lokuxolela izono. Upopu akanayo loo igunya, abefundisi awunalo elo gunya, Ababingeleli abayi kuba loo mandla uThixo kuphela. Waye uYesu unguThixo ngokwenyama.
Masenze intsingiselo yegama elithi uxolelo. Yithi umhlobo wam oniqhwabayo kum ubuso. akuyi kubakho nto uxolelo ukuba wathi kulungile, kodwa ke ukuba siphindise kuba kamva. Ukuxolela akuthethi nje akuthethi ndisamkela uxolo lwakhe, oko kuthetha ndiya kubaphatha naye, ukuba nonile kum. Ngoku ukuze ngokwasemphefumlweni kunye idada xa yena uya kuba ephakamileyo amahlanu. Ukuze akaziyekelanga kuye efanayo, kodwa andiyi kuthi ukuba sono kuye. Andiyi zama ukufumana ngasemva, okanye kuba krakra ngakuye. ulwalamano lwethu inokuphinda.
Isono lityala elibi uThixo. Yinto enkulu kangaka kuye, ukuba nje ngoyaba. Wayesazi kwakufuneka ukuba babethwe. kwethu UThixo walithanda kakhulu kangangokuba wathumela uYesu. Ke uYesu wayebathanda kakhulu kangangokuba wayekulungele ukuthatha ukuba isohlwayo emnqamlezweni kuthi. Yiloo nto lomnqamlezo. Yinto uYesu engenelela kwaye ukuthatha isohlwayo ukuba aboni bafanele.
Loo nto ifana mna enkundleni kwaye ngenene ndinetyala ngokucacileyo, kodwa kunokuba kohlwaywa umntu ebonisa ukuba isohlwayo kum.
Xa sithembele uKristu uThixo ebuyisela ulwalamano lwakhe kunye nathi. Yena uya kuzisula irekhodi zethu zicocekile. Yinto yamfumanisa engenatyala ukusuka uMgwebi wabo bonke iphela. Yena uza samkele sibe nolwalamano kunye naye. Akayi kubamba izono zethu kuthi.
KwabaseRoma 4:7-8 uthi, "Banoyolo abo bazenzo zabo zokuchas uzixolelwe, Abazono zigutyungelweyo; Hayi, uyolo lomntu lowo iNkosi ingakhe ibalele sono sakhe. "
Akukho nto ibuhlungu ngakumbi zonke liphela kunokuba kuma phambi koThixo ezonweni zenu. Kodwa kukho intsikelelo akukho mkhulu kuyo yonke iphela, kunokuba ukuze sixolelwe nguThixo.
rhoqo, AmaKristu igama nabanye ngokuba ukuzeyisa amalungisa. Kwaye ndicinga ukuba yinto ebuhlungu. Ngenxa kwinkcazelo ukuthemba uKristu yena wahluke ukuzeyisa ubulungisa. Loo nto usenokungavumi asinaso ubulungisa. Esiza kuThixo nokholo, ukuba uya kusixolela nathi ukungalungisi kwethu. Ngoko ke, ukuba amaKristu ukuba zasijija ukholo kuwe, wakubabala nabo. Yiloo nto Kristu wafundisa
Ngaba elide ukuze sixolelwe izono zakho? Ndifuna ukuba ucinga ngobomi bakho. Kukho izinto ezininzi ndenze ukuba kunjalo na. Siye Bamxokisa, kwaye siye bakhanukayo. Abaninzi kuthi bezirheletya baza kunxila. Abaninzi kuthi baye ebiweyo kwaye bepasa. Abaninzi kuthi yileyo uwabo, siza eyonqenayo, kwaye singade kuhamba. Yethu sonke. kubomi bethu ukucaphukisa uThixo ongcwele. Kwaye ndiyamangaliswa ukuba elide ukuze sixolelwe yezono.
Iindaba ezilungileyo, ukuba uxolelo ifumaneka kuYesu Krestu. Kodwa kuphela ukuba okunene wavuka kwabafileyo. kwaye kuphela, ukuba sikholwe ubomi, ukufa, nokuvuka kukaYesu.
Makhe siqwalasele kukusulela lokugqibela
III. Ukuba uKristu akazange amvuse, akukho ubomi obungunaphakade
Ngamnye wethu uyazi ukuba kukho into ezingalunganga ngokufa. Xa sisiya emingcwabeni, akukho akazange piñatas kunye confetti. Kukho isijwili. Kukho iinyembezi. Kukho rhoqo vuyo ukubhiyozela ubomi babo. Kodwa xa ucinga ngokufa ngokwayo, kukho eninzi ulusizi inxaxheba. Kuba ukufa kuphosakele. Yinto nemvelo.
Sicela wasebenzisa kangaka ukufa, ukuba kubonakala ngathi enye nje kwezo zinto kufuneka ukujongana. Nako oku yinto eyenzeke emva isono sangena ehlabathini. Ukufa yenzeka kuba siza aboni. Akukho nto kunene. Kwaye ngaphandle kokuba sibe ngesiquphe wadandatheka, akukho namnye kuthi ixesha lokufa. Sifuna ukuphila.
Ingaba ucinga ukuba uhamba eZulwini xa usweleka? Abaninzi kuthi qatha bamazulu njengendawo nice, apho izalamane zethu kuhamba xa ubomi buphelile. Kwaye kinda ndiyathemba sifike khona. Kwaye ukuba uthatha, ukuba emva kokufa, oko kuyayonakalisa isiphelo. Well uPawulos uthi, ukuba akukho luvuko, ngoko ke akukho nto.
"Ngoko abo nabalele ukufa bekuKristu, boba batshabalele. Ukuba singabathembele kuKristu ithemba kobu bomi kuphela, thina sizezona ntsizana kubantu bonke. '
Kwakukho abantu ukuba babethanda ukuba wasweleka, efanayo kuthi. UPawulos uthetha malunga ngamaKristu bayazi abafa. Wathi uPawulos uthi ukuba uYesu akazange avuke, ngoko ke nje batshabalala. Kwaye ke kwenziwa. Akukho ngonaphakade kunye noThixo.
Yena uya ngakumbi ukuba uthi, kufuneka amaKristu nanceba. Kufuneka bazive embi kuthi.
Kutheni ukuba imfesane?
Ngoku abantu abaninzi bacinga ukuba ubuKristu into apho nje ukuya ecaweni amaxesha randomly, kwaye mhlawumbi ukhumbule umthandazo weNkosi, musa ukuqonda isizathu sokuba uPawulos athi oku. Ngenxa ezingqondweni zabo, into ekuphela amaKristu baphulukane ngokwenene ngeCawa. Kodwa zilandelayo uKristu kuninzi.
UKristu ikhwelo yethu yonke. Ucela into. Acele ukuba sibeka ubomi bethu phantsi. Ukuba awuthwale thina cross. Ukuba sakha ubomi bethu ngeenxa zonke kuye. Yaye ukuba ngaba akayi kuvuka, siza osisiyatha. nanceba kuthi. Kuba sonke siye uyenzileyo ulilahle ubomi bethu kude ngaphandle kwesizathu.
Ukuba uKristu akazange amvuse, akukho ubomi obungunaphakade.
Kodwa ekubeni ve, kukho ubomi obungunaphakade!
Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama uNyana wakhe okuphela, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade.
Kukho bubomi obungunaphakade. Unakho avuke. Kwaye siphile ngonaphakade kunye noThixo. AmaKristu ukuba imfesane. AmaKristu abo banethemba obungaphesheya kwengcwaba. Yintoni onokuyenza ukuze umntu lowo ukoyika ukufa? UPawulos ngumzekelo omkhulu oku Filipi 1. Yena Kulungile ukufa kuba kuthetha efumana ukuba aye kuba uYesu.
Ngaba nawe ukuba koloyiko ukuba uPawulos? Lubakho kuphela omnye ngubani ukholose ubunyani nokufa kunye novuko lukaYesu.
Ukushwankathela: Ewe. Oku kubalulekile ukuba uYesu wavuka. Waza wasukuma. Ibali lakhe efanayo kwabanye ngokuba wafa. wonke umntu uyafa. Kodwa wonke umntu iyakunyuka. UYesu wavuka. Yaye uthembisa ukuba, ukuba sikuye nathi uya kuvuka aze achithe ngonaphakade lwethu kunye naye. Ngaba wena ukholose ngaye?
paul • UTshazimpuzi 18, 2014 ngexesha 11:47 mna • impendulo
Enkosi, umfundisi Lee. “UYesu Lowo uThixo wathumela ukubuyisela, yaye ngokukodwa ukubuyisela ukuba uMdali wethu. Nantso iindaba ezilungileyo.” Ezo ziindaba ezilungileyo! Le confetti kwenza ukuba sihleke. Wena kufuneka ngengqiqo eyodwa uburharha xa ushumayela. Ilungule.
Evan • UTshazimpuzi 18, 2014 ngexesha 2:14 pm • impendulo
Mthande yokuvelela ukukubulalisa ubuKristu zange ndicinge ngokunzulu kwezinye iicawa ukuze sazi kuphela abo na sithi umsindisi ukuba wafa wavuka ephila, okunene kulapha yemka ngexesha elifanayo ndimkile ndaya kunilungisela indawo
CynthiaAghomon • UTshazimpuzi 18, 2014 ngexesha 6:27 pm • impendulo
UYesu zonke izinto ngokwenene…akukho ubuKristu ngaphandle uYesu kunye nobomi ebengayi kuba nantsingiselo kunye nokudakumba ngaphandle ebethelelwe, nokufa kunye novuko. Ndithandaza ezininzi amehlo ziya kuvulelwa inyaniso yalo mcimbi lizukileyo.
Khankanya: VulcanYouth » iPasika!!
JacobAlger • UTshazimpuzi 20, 2014 ngexesha 8:11 pm • impendulo
man uhambo, enkoso ngokwabelana. Lo myalezo eyodwa enamandla. Ndenze ikholwa ukususela kid kodwa ndazibona ngokubuza lo mbuzo nje le Easter. Umyalezo wakho kunye neemfundiso zikaPawulos yenza kucace kangaka. Ndiyabulela intliziyo yakho umyalezo wakho, iintsikelelo dude yam!
Mario A. Ramirez • UTshazimpuzi 22, 2014 ngexesha 4:04 mna • impendulo
Siyabonga ixesha elikhulu bhuti
Didi • UTshazimpuzi 22, 2014 ngexesha 7:22 mna • impendulo
Andixolele ngokuba kade, kodwa utshintsha xa igama ukususela eqhayisa senkosi yam wakha alunayo? ngokunjalo, piece kakhulu kwi kwinqanaba Easter!
Trekkrestik • UCanzibe 20, 2014 ngexesha 8:27 pm • impendulo
uhambo aye, Ndinombuzo, whatre iingcinga zakho iPasika, nangamaxesha kwibhayibhile?
Greg • EyeNkanga 3, 2014 ngexesha 7:58 pm • impendulo
I Ndinombulelo kakhulu ngenxa yokwabelana lwakho lweLizwi likaThixo! Esi sithuba ikhuthaza me kakhulu. Ibe nzima kakhulu ukuba ukumgcina’ loyiso phambi engqondweni yam. Sekudlule phantse ngonyaka ukususela umzalwana wam omdala ka 17 yrs wafa. Ngokuqhwanyaza uThixo wathabatha ubomi bakhe ngenxa oko kwakubonakala kwingozi iyonke ukuba ongazange kwenzeke. Ndachitha ixesha elininzi naye; ubomi bam bonke yatshintshwa ngendlela zinkulu kwezakha–kunzima ukukholelwa ukuba ndiza kuza phezu ngokuba babebadala kunaye yena ukhe waba. Ngaba ndiya simbone? yena uya kuvuka?
Kwam kwesi sithuba kuba wamkhuthaza ingoma yakho “ULazaro.” Umelwe kangakanana kangaka, kwaye mna ukukubulela ngokwabelana iqiniso elibalulekile, ngenxa yokuba uYesu wavuswa ngumnqobi phezu kokufa, Ndiyazi ukuba ndiya kumbona Yena kukhangelana ebusweni…ke yena umkhuluwa wam kakhulu. Ndiyathemba ke ukuba ziyakhuthazwa!
Khankanya: La Sagrada Familia, #CrossEqualsLove | Kween
Sammy • EyeDwarha 15, 2016 ngexesha 11:34 mna • impendulo
eli bali linzulu ukuba yonke imbali kuxhomekeke kwinto yokuba uKristu wavuswayo kwabafileyo …
bonke abanye abaprofeti andizange ndambona ukukhanya ngosuku ukususela baya iinyawo ezintandathu nzulu ….
500 amangqina asinto ngoyaba sone … ndithi bloke efana jay z wafa kunye kwiintsuku ezintathu kamva ke wabuyela kwabafileyo !!!!
kodwa ke ziyintoni na ezo indlela ekunokuba 500 pepo wayeza zibone lo mcimbi njengoko zenzeka ???
ke ukuba uKrestu akavukanga ekufeni cinga ngomhla entsimini igunya ongumYuda ukuba !!!!
i ramifications kungaba ezibalaseleyo …
UbuKristu wayeza kuba unqulo kakhulu onyeliso kwi planethi akukho???
kodwa ngoba siyazi ukuba bali liphele ngendlela Sinethemba lokuba abafileyo kuKristu baya kuvuswa yaye oko ngaphezu iindaba ezilungileyo!!
JNote • UCanzibe 3, 2017 ngexesha 1:07 pm • impendulo
Trip indoda, inkosi ikusikelele! Ukuphulaphula iintshumayelo zakho kunye neemfundiso kunye nomculo, ngokuqinisekileyo yakuphakamisa me phezulu. Ezo ndaba zilungileyo, iVangeli, yinto abantu kufuneka baphile ngaphandle rhoqo kwaye Ndiyavuya ukubona ukwenza yona indoda. Xa sijonga indlela uThixo usebenzisa wena, kundinceda kakhulu ekubeni enze iqashiso izinto ezifanayo, musically kunye nasentsimini, ngoko bathi ekholisa uThixo umntu, Ndiza ukunithandazela.